Ra’iisal Wasaare Rooble oo ka hadlay dhacdadii Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde | Somali Link Newspaper
Guriga Breaking News Ra’iisal Wasaare Rooble oo ka hadlay dhacdadii Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde
Ra’iisal Wasaare Rooble oo ka hadlay dhacdadii Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde
Jicmo, April, 23, 2021 (HOL) -Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xusseen Rooble oo kulan la qaatay saraakiisha hay’addaha Amniga ayaa ka hadlay dhacdadii maalintii shalay ee Garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa sheegay in dhacdadaasi aheyn mid aan la aqbali karin, tallaabo sharci ahna laga qaadayo dadkii ka danbeeyey, waxaana uu faray wasaaradda amniga in baaritaan dhab ah lagu sameeyo falkaas.
Maalintii shalay ayeey aheyd markii gudaha Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde uu isku horimaad ku dhaxmaray shaqaalaha waaxda socdalka garoonka iyo hay’adda nabad-sugida, waxaana iska horimaadkaa ka dhashay khasaare isugu jiray dhaawacyo iyo waliba burbur hantiyeed.
Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa faray hay’addaha Amniga in ay dardar galiyaan howlahooda sugida amniga, baaritaan dhab ahna lagu sameeyo dhacdadii Garoonka Aadan Cadde.
Article horeTop general: Somalia withdrawal made counterterrorism missions riskier
Article soo socdaAU rejects ‘unilateral’ term extension